देवू Leganza कार यसको वर्ग सबैभन्दा सहज मोडेल को हुन मानिन्छ। रिलीज केही वर्ष पहिले निलम्बित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यसलाई एक निश्चित माग छ माध्यमिक बजार। मेशिन धेरै मोटर चालकहरुलाई लागि उपलब्ध छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, मोडेल नै रूस र धेरै युरोपेली देशहरूमा सिद्ध भएको छ। कार एक विशाल भित्री छ, र उपस्थिति मा आकर्षक।
विकास ItalDesign संयोजनमा गरियो। यो कार आधुनिक र स्टाइलिश दिन्छ। मोडेल "देवू Leganza" पहिलो आफ्नै चासो, अन्य निर्माताहरु देखि डिजाइन प्रतिलिपि छैन, अघि भएको छ रूपमा स्थापित छ। विचार वर्ष, 1993 मा उत्पादकहरु उत्पत्ति। तुरुन्त कार देवू Leganza 1997 मा शुरू भएको थियो, र 2002 मा पूरा भएको थियो जारी। उत्पादन मोडेल दक्षिण कोरिया, युक्रेन र रूस मा गरियो।
सुसज्जित र कार देवू Leganza (यो विशेषज्ञहरु टिप्पणी पुष्टि) पूरा गर्न वर्ग ई युरोपेली निर्माता को समान कार संग प्रतिस्पर्धा छ।
मानक विधानसभा समावेश डिस्क ब्रेक सबै पाङ्ग्राहरू, चालक airbag, ABS स्थापित छन्। विस्तारित उपकरण बदलिने डिग्री मा, मोडेल को अन्तिम लागत मा एक प्रभाव जो विभिन्न प्राविधिक नवाचारै सामेल छन्।
अगाडि सिट संयुक्त समायोजन संग सुसज्जित गर्दै छन्: तकिये शक्ति स्थापित गर्दै छन्, र पछाडि - यांत्रिक। को स्टेरिड़ पूर्ण छाला संग छोट्याउन छ। स्तम्भ झुकाव लागि समायोज्य। देवू Leganza मोडेल स्वतः जलवायु विनियमन, स्थापना संग सुसज्जित र एक हावा फिल्टर संग सुसज्जित छ। साथै, उपकरण एक डिजिटल स्टेरियो सिस्टम र एक बिजुली ड्राइभ समावेश पछिल्लो-दृश्य दर्पण।
यो कारको निलम्बन अपेक्षाकृत नरम छ। कार एकदम चिल्लो सवारी सवारी चलाउँदा।
वाहन इन्जिन देवू Leganza जसको रकम 1.8 2.2 गर्न लिटर हो सुसज्जित। यो सबै संशोधन निर्भर गर्दछ। को मोटर्स निर्माता "ओपल" मोडेल स्थापित छन्। यी इन्जिन उत्कृष्ट प्राविधिक विशेषताहरु, पूरै मिसिन नै को मापदण्डहरु अनुपालन जो प्रतिष्ठित छन्। प्याकेज समावेश वा स्वचालित वा मार्गदर्शन गर्न सक्छ। अधिकतम गति प्रति घण्टा 180 260 किलोमिटर देखि लिएर, कार विकास गर्न सक्ने। यो मोटर को क्षमता मा निर्भर गर्दछ। कार को 100 मी / घन्टा एक गति बढाउने बारेमा दस सेकेन्ड लाग्छ।
परिमार्जनहरू को एकदम व्यापक दायरा उपभोक्ताहरु इष्टतम कन्फिगरेसन चयन गर्न अनुमति दिन्छ। मोटर चालकहरुलाई उपलब्ध सबैभन्दा उन्नत सम्म आधार देखि संस्करण।
यसको उत्पादन मोडेल को पहिलो वर्ष समयमा देवू Leganza विशेष रूस मा, मात्र होइन कोरियामा पनि अन्य देशहरूमा ठूलो लोकप्रियता जित्यो। त्यसपछि मिसिन अत्यधिक व्यवसायीक र मालिक दुवै मूल्यांकन भएको थियो। हाल, कार तर, माध्यमिक बजार मा उपलब्ध छ, र यो मामला मा, यो धेरै प्रतिस्पर्धी रहनेछ। यो फरक आय क्रेताद्वारा को भाग मा मोडेल को लागि एक एकदम स्थिर मांग कायम गर्न मद्दत गर्छ।
स्वतः टाटा सोलारिस: प्राविधिक विनिर्देशों
बेयरिंग जहाज को बाहिर प्रोपेलर सापट कसरी विस्थापन गर्न?
Geomorphology - कि विज्ञान के हो? आधारमा र तत्व geomorphology
कसरी केही बाहिर पैसा बनाउन
विभिन्न तरिकामा Shtroblenie पर्खालहरु
Multivarka मा सूजी porridge: नुस्खा